Manorina fahamarinana ara-baiboly
“Mba omen’Andriamanitr’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, ho anareo ny fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana amin’ny fahalalana Azy tsara” . Efes. 1:17
Ireo fahamarinana izay efa niseho araka ny filaharany, sy ny nanehoantsika azy araka ny zotran’ny faminaniana voambara tao amin’ny tenin’Andriamanitra, dia marina, masina, fahamarinana mandrakizay amin’izao andro izao. Ireo nandao ny tany tsikelikely tamin’ny tantaran’ny fanandramantsika teo aloha, nahita ny mason-drojon’ny fahamarinana tao amin’ny faminaniana, dia voaomana handray sy hankato ny tara-pahazavana tsirairay. Nisy vavaka, fifadian-kanina , fitrandrahana lalina ireo fahamarinana izay toy ny harena miafina, fa ny Fanahy Masina, izay fantatsika, dia nampianatra sy nitari-dalana anay.
Betsaka ireo laha-kevitra naroso, toa marina, nefa mifangaro amin’ny fandikana sy fampiharana diso izay voasoratra ka mitarika any amin’ny fahadisoana mampidi-doza; Fantatsika tsara ny fomba nanorenana ny teboky ny fahamarinana rehetra, ary vita tombokasen’ny Fanahy Masin’Andriamanitra izany. Re avokoa ireo feo isam-potoana manao hoe: ‘indro ny fahamarinana”, “Manana ny marina aho; manaraha ahy:” Saingy efa nisy fampitandremana hoe: “Tsy naniraka ireo mpaminany ireo Aho, kanefa nidododo ihany izy, tsy niteny taminy Aho, kanefa naminany ihany izy” (jereo Jer. 23:21).
Efa voamarika ny fitarihan’ny Tompo, ka nahagaga indrindra ireo fanamabarana ny amin’izay tena marina. Ny teboka tsirairay dia narindran’ny Tompo Andriamanitry ny lanitra. Izay fahamarinana tany aloha dia fahamarinana ankehitriny koa; Tsy mety lefy anefa ireo feo fa re hatrany ny hoe: “Misy fahamarinana ity. Nahazo fahazavana vaovao aho”. Saingy ireo fahazavana vaovao araka ny zotran’ny faminaniana ireo dia miseho amin’ny fampiharana diso an’ilay Teny ka mametraka ny vahoakan’Andriamanitra eo amin’ny hevitra tsy marim-pototra hihazonana azy. Raha ny mpianatra ny Teny no mandray ireo fahamarinana natolotr’Andriamanitra hitarihana ny vahoakany, ka mandray izany ho an’ny tenany, mivelona amin’izany sy mitondra ary mampihatra izany amin’ny fiainany dia ho fantsona velon’ny fahazavana izy ireo. Fa ireo izay nitoetra tamin’ny fianarana ireo laha-kevitra vaovao, mampifangaro ny marina sy ny diso, nanadrana ka nametraka azy ireny ho lohalaharana, dia efa naneho sahady fa tsy nandrehitra ny fanalany avy teo amin’ny alitaran’ny lanitra, ary mizotra ho any amin’ny fahamaizinana.